Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Boeing dia manambara ny fanovana ny biraon'ny mpitantana azy
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Boeing dia nifidy an'i David L. Joyce ho filankevi-pitantanana; Ny amiraly Edmund P. Giambastiani Jr. hisotro ronono amin'ny Birao.
David L. Joyce dia nifidy tao amin'ny Biraon'ny talen'ny Boeing.
Misotro ronono ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny Boeing ny amiraly Edmund P. Giambastiani Jr.
Ny fanovana ny Birao mpitantana ao Boeing dia mandaitra avy hatrany.
Nanambara ny filankevi-pitantanana ny orinasa Boeing androany fa voafidy ho mpikambana ao amin'ny birao i David L. Joyce, avy hatrany. Izy dia hiasa ao amin'ny komity Aerospace Security and Compensation. Nanambara ihany koa ny birao Boeing androany fa ny amiraly Edmund P. Giambastiani Jr dia nampandre ny orinasa fa hiala amin'ny birao izy amin'ny faran'ny 2021.
David L. Joyce dia nifidy tao amin'ny Biraon'ny talen'ny Boeing
Mpanatanteraka aerospace nahomby, Joyce, 64 taona, nisotro ronono avy any General Electric (GE) amin'ny maha talen'ny lefitra azy tamin'ny taona 2020, toerana nitondrany koa filoham-pirenena sady CEO an'ny GE Aviation nanomboka ny taona 2008 ka hatramin'ny taona 2020. Nandritra ny 12 taona nitarihany ny fizarana lehibe indrindra an'ny GE, Joyce koa dia nitazona ny fanohanan'ny mpanjifa sy ny vokatra ho an'ny milina manerantany maherin'ny 19,000 sy mpanjifa an'habakabaka 500 ary manara-maso ny fampiharana rafitra fitantanana fiarovana amin'ny alàlan'ny indostria manerana ny GE Aviation.
Veteranin'ny GE iray 40 taona, nanatevin-daharana i Joyce Avotra tamin'ny taona 1980, injenieran'ny vokatra ary nandany 15 taona namolavolana sy namolavola ny motera ara-barotra sy ara-tafika an'ny GE, alohan'ny niasany tamin'ny toerana samihafa amin'ny GE Aviation, anisan'izany ny filoha lefitra sy tale jeneralin'ny Engines Commercial. Joyce dia nahazo mari-pahaizana bakalorea ary mari-pahaizana momba ny injeniera mekanika avy amin'ny oniversitem-panjakan'i Michigan ary manana mari-pahaizana momba ny fitantanam-bolan'ny orinasa Xavier University.
"David Joyce dia mpitarika indostria aerospace fantatra fa mitondra firaketana an-tsoratra momba ny fitarihana fiarovana, fahaiza-manao injeniera ary fahombiazan'ny asa amin'ny birao," hoy i Boeing Filoha Larry Kellner. “Hanome torohevitra sy fitarihana sarobidy izy, miorina amin'ny zavatra niainany lehibe.”
Joyce dia mpikambana ao amin'ny National Academy of Engineering, ary mpandray ny loka James Forrestal Industrial Leadership Award an'ny Fikambanana National Defense Industrial Association ary ny American Society of Materials 'Medal ho an'ny fampandrosoana ny fikarohana. Nanomboka ny taona 2010 dia niasa tamin'ny filankevi-pitantanan'ny University Xavier izy.
"Boeing dia handray soa avy amin'ny traikefa nahafahan'i David Joyce fiaramanidina lalina sy ny fifandraisany amin'ny indostria malalaka, ”hoy i David Calhoun, filoha sady CEO an'ny Boeing, ary mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanana. "Ny traikefan'i David manova orinasa sy mifantoka amin'ny kalitao sy ny fiarovana amin'ny indostrian'ny aerospace dia hampatanjaka kokoa ny birao."
john jenkins hoy:
September 1, 2021 ao amin'ny 02: 46
Andriamatoa Joyce dia voafantina tsara avy amin'ny mpitarika Boeing. Ny fanabeazana sy ny traikefany dia hahafahany mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra noraisin'i Boeing ho stratejika sy taktika. Midera an'i Boeing aho noho io fifantenana io, tsy toy ny safidin'ny mpikambana maro ao amin'ny Birao izay natao ho an'ny hetsika fandraisana andraikitra fotsiny. Ny fahombiazan'ny orinasa amerikana dia ilaina amin'ny fitazonana ny toekarentsika sy ny filaminam-pirenena.